Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor ayaa kulan gaar ah yeeshay hoyga Ra’iisul wasaarihii hore.
Xasan Cali Kheyre oo ka falceliyay kulanka ayaa sheegay in kulan miradhal ah la qaatay madaxweynaha Galmudug, ayna ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo kaalinta Galmudug.
“Waxaan xalay kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Ahmed Abdi Kaarie Waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashada iyo kaalinta Galmudug” ayuu ku yiri qoraal uu bartiisa Internet-ka ku daabacay.
in Farabougou, mediation is activated to loosen the grip of the…
“Sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Galmudugta loo dhan yahay iyo waxyaabaha horyaalla maamulkiisa”ayuu hadalkiisa raaciyay Khayre.
Xasan Cali Kheyre ayaa qeyb ka ahaa shirkii Dhuusamareeb 2, iyadoo saddex maalin kaddib markii shirkaas soo gabagboobay uu Golaha Shacabka si lama filaan ah xilka ugu tuureen, taas oo dhalisay dood ku aadan sharci ahaanta Mowshinkaas.
Kheyre ayaa lagu xusuustaa dadaalkiisa dhismaha Galmudugta cusub, isagoo waqti badan ku bixiyay, iyadoo sidoo kale uu dhisay Madaxweyne Qoorqoor oo ka mid ahaa Golihiisa Wasiirada,inkastee Qoorqoor lagu xanto in uu qayb ka ahaa xilka qaadistii Khayre.